Nri Diatomite Nri, Wine Diatomite, China Diatomite ntụ ntụ - Yuantong
Nchọpụta Diatomite, mmepụta, ahịa, nyocha na mmepe
chukwuemeka odumegwu ojukwu ...
Ndị na-emepụta Diatomite
Jilin Yuantong ralnweta Co., Ltd. emi odude ke Baishan, Jiling Province, ebe bụ ihe kasị elu-ọkwa diatomite na China ọbụna Asia, nwere 10 enyemaka, 25km2 nke Ngwuputa ebe, 54 km2 ngagharị ebe, ihe karịrị 100 nde tọn diatomite nwere ihe ruru ihe karịrị 75% nke nchekwa China niile. Anyị nwere usoro mmepụta 14 nke diatomite dị iche iche, yana ikike imepụta kwa afọ karịa tọn 150,000.
Ngwongwo diatomite kacha elu na teknụzụ mmepụta ihe dị elu na patent.
Mgbe niile na-erube isi "ahịa mbụ" nzube, anyị ji ịnụ ọkụ n'obi na-enye ndị ahịa na nke kacha mma-na ngwaahịa na-adaba adaba na-eche echiche ọrụ na oru ndụmọdụ.
The Technology Center nke Jilin Yuantong ralnweta Co., Ltd. ugbu a nwere 42 ọrụ, na nwere 18 ọkachamara technicians na-emekwa ụfọdụ na mmepe na nnyocha nke diatomaceous ụwa
Na mgbakwunye, anyị enwetara ISO 9 0 0 0, Halal, Kosher, sistemụ nchekwa nchekwa nri, sistemụ njikwa ogo, asambodo ikike mmepụta nri.
China na Asia nwere ebe nchekwa dị ukwuu nke ndị na-emepụta diatomite dị iche iche
Ihe ọ juiceụ juiceụ onunu
Onye mbụ na-emepụta diatomite na China.
Ntọala na 2007
Ndị enyemaka 10
Karịa kwa afọ mmepụta
ahịa òkè bụ karịa na 60%
Teknụzụ kachasị elu, oke ahịa ahịa
"2020 China Non-Metallic Mineral Industry Conference and Exhibition Expo" nke China Non-dara Malllọ Ahịa Ahịa nwere nke ọma na Zhengzhou, Henan site na November 11th ruo 12th.
022021 / Jenụwarị
Diatomaceous Forwa Maka Ahụhụ
Have nụtụla banyere ụwa diatomaceous, nke a makwaara dị ka DE? Ọfọn ma ọ bụrụ na ọ bụghị, kwadebe ka iju gị anya! Ojiji nke uwa diatomaceous n'ime ugbo di nma. Diatomaceous ụwa bụ ngwaahịa dị ịtụnanya nke ụwa niile nwere ike inyere gị aka toro ogige mara mma ma dị mma. Gịnị bụ Diatomaceous Earth? Di ...
Jilin Yuantong Mining Co., Ltd. abuana ke ...
"2020 China Non-Metallic Mineral Industry Conference and Exhibition Expo" nke China Non-dara Malllọ Ahịa Ahịa nwere nke ọma na Zhengzhou, Henan site na November 11th ruo 12th. Na òkù nke China Non-Metal Mining Ind ...
Aka na aka iji merie agha megide epid ...
Na Febụwarị 3, 2020, n'oge dị oke egwu nke ọgụ megide "ntiwapụ ọrịa", Jilin Yuantong Mining Co., Ltd., iji kwado mgbochi na njikwa nke ọrịa coronavirus ọhụrụ, wepụtara akụkọ ọhụrụ na Linjiang City site ụlọ ọrụ Linjiang City na Ozi Bur ...